Annaga nagu saabsan - Huizhou Olink Technology Co., Ltd.
Ku saabsan & Olink Technology Co., Ltd.
Laga soo bilaabo 2001, Olink waxa ay aad u xiisaynaysaa soo saarista xargaha xargaha ee kastamka, shirarka fiilooyinka, fiilada USB, isku xidhayaasha maqalka baabuurka, godad, wafer iyo terminal.Dhanka kale, waxaan sidoo kale siinaa OEM, adeegga ODM ee naqshadeynta alaabta/marxaladda APQP baahida macaamiisha.
Nidaamkayaga guriga dhexdiisa waxaa ka mid ah samaynta iyo qalabaynta, fiilada iyo fiilada fiilada, isku xirka iyo isku xirka, shaambada saxda ah ee birta, xajinta siliga iyo isku xirka fiilada.Waxaanu bixinaa xidhidhiyaha baabuurta iyo godad buuxa oo loogu talagalay dhammaan noocyada baabuurta ugu iibinta fiican.
Alaabooyinka Olink waxaa si weyn loogu isticmaalaa aaladaha elektiroonigga ah ee baabuurta sida nidaamka amniga, nidaamka AV, nidaamka Multimedia iwm, iyo sidoo kale gawaarida korontada, UTV-yada, gawaarida cawska dhulka, qalabka caafimaadka, qalabka isboortiga, mashiinada casino, ATM, qalabka guriga, macaamiisha. elektarooniga iyo iftiinka LED.Qalabka la codsaday waa ROSH/Reach/CA65 u hoggaansan oo leh UL/CUL, VDE, CCC oggolaanshaha.Xadhkaha otomaatiga ah iyo fiilooyinka waxay waafaqsan yihiin heerarka SAE/JASO/DIN.Waxaan heli doonaa IATF16949 ugu dambeeyay May 2018.
Waxaan u dhoofin Yurub, Mid-bari, America, Australia iyo Japan suuqa.Macaamiishayada caanka ah waxaa ka mid ah 3M, Yamaha, Honeywell, Valeo, VDO iyo Visteon.
Warshadayadu waxay ku taal Magaalada Huizhou, Gobolka Guangdong, oo hal saac kaliya loo wado Shenzhen.Iyada oo wadarta 17,000 mitir oo laba jibbaaran aagga aqoon-is-weydaarsiga, waxaan leenahay ku dhawaad ​​700 oo asxaab ah.
Ku orda nidaamka ERP iyo CRM, Waxaan had iyo jeer u hoggaansanahay wanaagga ah NOQOSHADA RALIABE, U ABUUR QIIMO DHEERAAD AH MACMIILKA oo ku kora macaamiisha
Waxaa naga go'an inaan noqono alaab-qeybiye caalami ah oo ODM ah oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha siliga iyo golaha fiilooyinka, waxay ku gudbeen shahaadada IATF 16949: 2016 nidaamka tayada iyo ISO14001: 2015 nidaamka deegaanka, iyo sidoo kale shahaadada nidaamka caafimaadka ISO13485.
Badeecadahayadu waxay u hoggaansamaan RoHS, REACH iyo heerka ilaalinta deegaanka ee aan phthalate ahayn, dhammaan alaabta ceeriin waa UL la ansixiyay.
Shaqaalahayaga waaxda wax soo saarka ayaa khibrad 5 sano ka badan u leh wax soo saarka xargaha xargaha.QC waxay leedahay wadar ahaan 18 shaqaale.Xulasho adag ka dib, kormeerka suunka siliggu wuxuu leeyahay waayo-aragnimo in ka badan 8 sano.Waaxdayada injineernimada waxay heshay shahaado farsamo oo badan iyo 15 sano oo waayo-aragnimo cilmi baaris ah iyo horumarinta alaabta xadhkaha xargaha.
Waxaan bixinaa adeegga 7 * 24H si aan u bixinno oraahda macaamiisheena hal maalin gudaheed, bixinta muunado 3 maalmood gudahooda, dalabka waxaa la keeni karaa 7 maalmood gudahooda sida ugu dhaqsaha badan, awooddeena maalinlaha ah ee wax soo saarka waxay noqon kartaa ilaa 500, 000 pcs.
Badeecadahayadu waxay ku raaxaystaan ​​suuqyada Maraykanka, Yurub, Australia, Kanada, iyo Aisa.
Waxaan si daacad ah u soo dhawaynaynaa booqashadaada, Huizhou Olink Technology Co., Ltd.waxay noqon doontaa lamaanahaaga lagu kalsoonaan karo !
Automotive Wire Harness Wire Harness Cable Assembly For Home Appliance Vehicle Wire Harness Auto Wire Harness Cable Assembly >© Xuquuqda daabacaadda 20102020: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.